Madaafiic Qasaaro geysatay oo maanta markale lagu garaacay xaafado kamid ah degmooyinka Yaaqshiid iyo Hiliwaa ee gobolka Banaadir. - khaliilberberawi's blog
Madaafiic Qasaaro geysatay oo maanta markale lagu garaacay xaafado kamid ah degmooyinka Yaaqshiid iyo Hiliwaa ee gobolka Banaadir.
Madaafiic Qasaaro geystay ayaa maanta markale waxaa lagu garaacay xaafado kamid ah degmooyinka Yaaqshiid iyo Hiliwaa ee gobolka Banaadir.
Abaara 2-dii Duhurnimo ee maanta ayaa mar qura Madaafiic xoogan aad u faro badan waxaa lagu garaacay xaafado kamid ah degmooyinka Yaaqshiid iyo Hiliwaa ee gobolka Banaadir kuwaasi oo sababay qasaaro soo gaaray dad rayid ah oo ku sugnaa guryahooda.
Xaafadaha ay Madaafiicda ku dhaceen ayaa waxaa kamid ah Ceymiska, Juungal, S Y L, iyo xaafada Godey ee deegaanka Suuqa Xoolaha ee degmada Hiliwaa inkastoo xaafadahaasi qaar horay ay uga barakaceen dadkii ku sugnaa.
Ugu yaraan 6-ruux oo rayid ah ayaa ku geeryootay Madaafiicdaasi maanta lagu garaacay xaafadaha degmooyinka Yaaqshiid iyo Hiliwaa halka ay ku dhaawacmeen 7-kale kuwaasi oo Madaafiicdu ay kula dul habsatay aqaladooda.
Ma cada ilaa iyo hada sababaha rasmiga ah ee ka danbeeya Madaafiicdaasi maanta lagu gaaracay degmooyinka Yaaqshiid iyo Hiliwaa ee gobolka Banaadir iyo waliba sidoo kale Jihada ay ka soo dhaceen.
Mudooyinkii ugu danbeeyay ayaa xaafadaha qaar ee degmooyinka Yaaqshiid iyo Hiliwaa ee gobolka Banaadir waxa ay marti iyo hoy u noqdeen Madaafiic xoogan kuwaasi oo qasaaraha ugu badan ay soo gaarsiiyaan dadka rayidka ah ee aan waxbo galabsan.
# Posted on Tuesday, 12 January 2010 at 11:27 AM